Snn Nepal मानिसलाई डसेपछि किन मर्छ मौरी ? – Snn Nepal
मानिसलाई डसेपछि किन मर्छ मौरी ?
तपाईंलाई मौरीले डसेको छ ? यदि डसेको छ भने थाहा होला मौरीले डसेपछि कति धेरै पीडा हुन्छ भनेर । मौरीले टोक्दा यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, डसेपछि मौरीको पनि मृत्यु हुन्छ ?
यता मौरीको खील हातले निकाल्न खोज्नु हुँदैन । किनभने, हातले निकाल्न खोज्दा त्यहाँ चुँडिएर रहेको मौरीको विष ग्रन्थी निचोरिएर झनै घाउमा जान सक्छ । त्यसैले, नंग काट्ने औजार वा अन्य त्यस्तै कुनै औजारहरुको मद्दतले मात्र त्यसलाई हटाउनु पर्दछ